Isnadaamis | Zanzu
Caabuqa maqaarka waxaa sababa xawayaan yar (dulin). Isnadaamiska waxa uu sababaa cuncun badan, muhiim ahaan caloosha, xubinaha taranka, baabacooyinka gacmaha iyo maqaarka u dhexeeya faraha. Kiriim, kiniin, ama kiniino la qaato ayaa dawayn karo isnidaamiska.
Isnidaamiska waxaa lagu gudbin karaa dhexda galmada (STI) waanu faafaa. Isnadaamiska sidoo kale waxaa lagu gudbiyaa taabashada maqaar ilaa maqaar.